Doorashada 2013 ee Stewards - Meta
Doorashada 2013 ee Stewards
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Latina • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎Soomaaliga • ‎Zazaki • ‎azərbaycanca • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎kurdî • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎ייִדיש • ‎العربية • ‎تۆرکجه • ‎فارسی • ‎کوردی • ‎বাংলা • ‎தமிழ் • ‎ქართული • ‎中文（简体） • ‎中文（繁體） • ‎日本語 • ‎한국어
Steward (Doorashooyin 2013) Caawinaad →
*Waxay dhacaysaa doorashada cusub stewards ugu yaraan halmar sanadkiiba. Martida waxa ay gudanaysaa tirooyin kamid ah wax yaabaha muhiimka ah Farsamaynta dhamaan wikiga ee wikimedia iyaga oo kacabir qaadanaya ra'yiga bulshada ee Steward policy: isbedel Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee gudagalaha،Eegista macluumaadka adeesadayaasha xaalada qarbudaada، waxyaaba kale , sidoo kale (eeg details).
Macluumaad ku saabsan doorashooyinka، Turjumid، ama isi sharxid, read the guidelines. Waad gaari kartaa iskeed ah Inaad codayn karto.
Natiijooyinka isi sharxidda ka bilaabato 15 Janaayo 2013، saacaddu marka ay tahay 00:00 ilaa 28 Janaayo 2013،Saacaduu marka ay tahay 23:59(UTC). Su'aal waad soo gudbin kartaa Waxa laga doonayaa murashaxiinta in ay gaaraan dhamaadka doorashada.
Waxa ay bilaabanaysaa codaynta maalinta 0:00 (UTC) ee 8 febarayo 2013, waxay dhamaaneeysaa 23:59 (UTC) ka bilaabato 27 febbraio 2013, 23:59 (UTC). Waxaa laga rabaa marashaxiinta
criteria in ay helaan codad gaaraya 30 cod si loo aqbalo in u dhiganta 80% ku ayiday. Waxaad ka sii tix raaci kartaan bogga Tirakoobka guud.
Waxaa socota Hubinta howsha steward kuwa hadda jira waxaa loo qaadanayaa si bar bardhac ah.
1 Wajiga Hore
1.1 Ka haray
1.2 Uma qalmo
2 Gudiga doorashooyinka
Dhamaan cadaymaha (Codayn la'aan)
Marashaxiintaan way iskaga hareen Murashnimadoodii
Murashaxiintaan kuma qanacsana shuruudaha halkaan lagu qoray Caawinaad way ka fariisteen.
Steward laftooda waxay diyaarinayaan doorashooyinka, Maamule yaasha diyaarinaya ee jaaliyadda, Philippe Beaudette. Waa la Board of Trustees goaamiyey 2009 in laga reebtoomo xaqiijinta doorashooyin cusub. waxaa jira, Steward waxay go'aansadeen in ay sameeyaan guddi doorashooyin ee ka kooban kuwa iskood wax u qabsa ah waxayna qabanayaan arimahaan soo socda:
Xiridda doorashooyinka 2013 ee qaaliyaasha;
Kadibna ar xubiyaan natiijooyinka doorashada, kadibka dhamaan murashaxiinta codadka helay;
Magacaabista laba murashax ee la doortay;
Xiridda doorashada 2013 ee la hubiyey;
Kadib markii lala hadlo korjooge, waxaana lagu cabirayaa ra'yiga dadweynaha iyo qaaliga,Sidaas ayaa lagu go'aaminayaa ama ka hoose.
Si aad gacan uga gaysato ama caawinaad iyo iskudubarid doorashooyinka la marti galiyey, Fadlan eeg Bogga iskudubaridka.
Hadii aad caawinaad ubaahantahay, Si xor ah u waydii #wikimedia-stewards-electionsconnect ama halkaan Bogga wada hadalka.
Waxaad sugtaaba waa gabogabayn
Bogga Tirakoobka Doorashooyinka
Qaybta dhamaan kuwii ku guul daraystay doorashooyinka
Bogga isku dubaridka stewards hadda socda ee 2013
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Stewards/Elections_2013/so&oldid=15616360"